သင်က Read လိုပေမည်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်း Excellent ကသိကောင်းစရာများ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / သိကောင်းစရာများ / သင်က Read လိုပေမည်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်း Excellent ကသိကောင်းစရာများ
သင်က Read လိုပေမည်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်း Excellent ကသိကောင်းစရာများ
ယာကုပ် ဧပြီလ 18, 2016 သိကောင်းစရာများ 1 မှတ်ချက် 778 views
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာအခြားလူကိုသင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သော်လည်းသင်တန်ဖိုးရှိရှိခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါရာအရပ်ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တည်ရှိသောဖူး? သင်အမှန်တကယ်ကိုထပ်တခါ၏ပိုလွန်ခြင်းကိုချင်ဘယ်တော့မှလျှင်သင်အကျိုးစီးပွားဖြုန်းရမယ်. အောက်ပါဆောင်းပါးကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေ့စဉ်ဘဝမှခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များပါဝင်သည်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြသပေးမှာ.
အံ့သြဖွယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဝယ်ခုနှစ်တွင်, သငျသညျရိုးသားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သင်တန်းကလူတွေဦးဆောင်လမ်းပြရန်ကြိုးပမ်းမှုအောင်ခံရဖို့်၏. သင့်ရဲ့နောက်လိုက်သင့်ရဲ့ရိုးသားမှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်. သင်မကြာခဏသင်၏လူများနှင့်အတူရိုးသားမှုကြိုးစားကြရမယ်, ဒါဟာအဖြစ်စနစ်တကျရိုးသားမှုဆီသို့သူတို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးအပ်သည်အတိုင်း.
ရိုးသားမှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှအလှနျအရေးပါဖြစ်ပါသည်. ထိရောက်သောခေါင်းဆောင်များယုံကြည်စိတ်ချများမှာ. သငျသညျခေါင်းဆောင်မှုအဘို့သင့်စွမ်းရည်အပေါ် operating ကြသောအခါ, သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားလူများနှင့်တသမတ်တည်းရိုးသားသောဖြစ်ကြသည်သေချာအောင်. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အပေါ်မှာပဲမူတည်နှင့်သင်တို့အထဲ၌ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်တူသောခံစားလာလျှင်တစ်ဦးကယောက်ျားမိန်းမသင်တို့အဘို့အများကြီးပိုပြီးလေးစားမှုရှိပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခေါင်းဆောင်သို့လှည့်တစ်ခုမရှိမဖြစ်အနေအထားလုပ်ဆောင်. သငျသညျလုပ်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူ comfy ဖွစျလိမျ့မညျမှအချို့သော Be. သင်တစ်ဦးပြဌာန်းခွင့်ကိုသင်ကမောက်ကမလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါ, ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုမဆင်းကွာစောင့်ရှောက်. အဲဒီမှာအထဲကကိုယ်ကျင့်တရား၏မတူညီသောအစုနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, သင်ညာဘက်ပြဿနာလုပ်နေလုပ်နေအပြုသဘောဖြစ်ရန်ရှိသည်.
အလွန်ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်, သင်ရုံယှဉ်ပြိုင်ရန်မလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်ပါတယ်. သငျသညျနေရာချထား အကယ်. သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို၏အတည်ပြုမည်မဟုတ်, ထို့နောက်သူကသီးခြားလမ်းကြောင်းရှာတွေ့သငျသညျအထိဖွင့်ပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်. သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုလျော့ကျလာခြင်းမရှိဘဲယှဉ်ပြိုင်ဖို့နည်းစနစ်ရှိပါတယ်. သင်ကစားပွဲထဲမှာနေဖို့တစ်ဦးလတ်ဆတ်လမ်းထွက်တွက်ဆထားလျှင်, သငျသညျပျြောရှငျဖွစျနိုငျသ.
သင့်ရဲ့အဖွဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ကယ့်ကိုအရေးပါဖြစ်ပါသည်. အားပေးဖို့ဘယ်လိုပေါ်တက်ကိုဖတ်နှင့်သင်ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖန်တီးရန်ခဲယဉ်းအလုပ် Make. တစ်ဦးချင်းစီတာဝန်များကိုအပေါ်လည်းအများကြီးပစ်မှတ်ချပြီးတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, စနစ်တကျထုတ်သယ်ဆောင်ရန်အုပ်စုလာအောင်နှိုးဆွ.
သင်တစ်ဦးပြည့်စုံအဖြစ်သင့်လုပ်ငန်းဘို့ရာခန့်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ. လူအပေါင်းတို့သည်သူတို့အဘို့အရိုက်ကူးနိုင်သည်အချို့သောအရာရှိသည်ဖို့ကြိုက်တယ်, ကြီးစွာသောခေါင်းဆောင်ကြောင်းဦးတည်ချက်အတွက်မိမိတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်များကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်. သင်ရုံကြွေးကြော်သည်နှင့်သင့်သိမ်းပိုက်ပြီးဆုံးကြောင်းမယူဆနိုင်ပါတယ်. လူတိုင်း၏တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တစ်လရည်မှန်းချက်အစည်းအဝေးများမှတစ်လ Hold.
သငျသညျအလုပျခှငျမှာစိတျနှငျ့ပတျဝနျးကငျြဆနျးစစျနဲ့အကဲဖြတ်ရန်နေ့တိုင်းအချိန်အနည်းငယ်ရ. သငျသညျကိုသူတို့ကယ့်ကိုခံစားရပုံကိုသိခွင့်ပြုပါရန်သင်၏လက်အောက်ငယ်သားအချို့အတွက်ကိုယူခဲ့. အကြံပြုချက်များမှပွင့်လင်း Be, created ရမည်ပြုပြင်မွမ်းမံအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရေးအပေါ် operate.
ခေါင်းဆောင်များဆွေးနွေးချက်ထက်အများကြီးပို listen. အလွန်ကြီးစွာသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းအားလုံးပြောပါရန်ရှိသည်သောအရာကိုအခြားသူများကိုကြားနာအကြောင်း. သငျသညျအောကျတှငျအလုပျလုပ်နေတာကလူကိုနားထောင်. ဤသည်သင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပြဿနာများကိုပါဝင်ပါသည်. တိုင်းအလုပ်သမားပစ္စည်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်သို့သောအကြောင်းဟူမူကားဖြစ်ပါတယ်နှင့်မည်သို့ရှေးရှေးကအလုပ်သမားဖြစ်ကြောင်းအဘယျသို့ထွက်ပုံ. သငျသညျနားထောငျခွငျးဖွငျ့သငျသညျအထဲကရှာတွေ့ပုံကိုသိသာထင်ရှားစွာမှာအံ့အားသင့်စေခြင်းငှါ.
အစွမ်းထက်ခေါင်းဆောင်များဟာသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုနှင့်၎င်းတို့၏အားသာချက်နားလည်. သငျသညျဝါကွှားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုခိုင်ခံ့စေလိုသောနေရာများမှထည့်သွင်းစဉ်းစားထွက်ပေးဆောင်.
အလွန်သင့်ရဲ့အမှားတွေကိုအထိပိုင်ဆိုင်. အဘယ်သူမျှမလူတစ်ဦးသည်အကောင်းဆုံး. သင့်ရဲ့အမှားမှတက်ပိုင်ဆိုင်, သူတို့ကိုဆုံးနှင့်သူတို့ထံမှလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ကြီးမြတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်လူ့နေသောသူတို့ကိုပြသပါလိမ့်မယ်, သူတို့နည်းတူ. ကျရှုံးခြင်းဝန်ခံခမ်းနားမကြည့်နိုင်နေတုန်း, ကနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ဂုဏ်သရေရှိဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးအမှားရာအရပ်ကိုကြာလာတဲ့အခါ, အလွန်ကြီးစွာသောခေါင်းဆောင်တစ်ခုခုထွက်ရှာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်မြင်ကွင်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, အစားဝေဖန်ဖို့အခွင့်အလမ်း. ယင်းအခက်အခဲနှင့်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှဆွေးနွေးခြင်းသူတို့ကိုအများကြီးကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်.
သင်အမြဲအသစ်များခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ထွက်ရှာရန်ရှာကြသည်ယုံကြည်မှု Make. အခြို့သောသင်ခန်းစာများကို Get သို့မဟုတ်စနစ်တကျဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ဘယ်လိုပေါ်သစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုသွား. တိုးမြှင့်ဖို့သစ်ကိုနားလည်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်စွမ်းရည်များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်. ကို up-to-date ဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ယုံကြည်မှု Make.
ဝန်ထမ်းရေးရာထိထိရောက်ရောက်ပြောဆိုရန်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်များကယူဆ. နားထောင်ခြင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏အရေးအကြီးဆုံးရိုဖြစ်ပါသည်. ဝန်ထမ်းပယ်နိန်သို့မဟုတ်သင်သူတို့ပြောဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုမကြားလိမ့်မည်ဟုဟန်ဆောင်ရှောင်ကြဉ်ပါ. တစ်စုံတစ်ယောက်ညညျးညူခဲ့လျှင်, သူတို့ပြောနေကြပါသည်အရာကိုအာရုံစိုက်.
တံခါးနားမှာသင့်ရဲ့အတ္တ Check, နှင့်သင်္ဘောသားမှသင်၏အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းဘယ်တော့မှ. အစဉ်အဆက်အုပ်စုကျော်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ဘယ်တော့မှမ, သငျသညျလူများ၏အဓိကအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ကြောင်းအချိန်မှာတောင်. သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းပြီးမြောက်ကိုထုတ်မကြိုးစားပါ. အဆုံးမှာ, သင့်ရဲ့အမှုထမ်းသင်လုပ်လေ့ရှိတယ်ကားအဘယ်သို့သို့မဟုတ်သင်ချိုး, ဒါလုံးဝလူတိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ခံစားရယုံကြည်မှုဖြစ်.
ကောင်းသောခေါင်းဆောင်မှုအခိုငျအမာ၏အောင်မြင်မှုမှအလွန်အရေးပါသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သငျသညျခေါင်းဆောင်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအသိအမှတ်ပြုရန်မည်မဟုတ်ပါလျှင်, သင်အမှန်တကယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခံစားခဲ့ရပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ. ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြောင့်အကြပ်အတည်းဒီ post အားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်.
လွန်ခဲ့သော သက်သေအထောက်အထား Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
Pingback: အဆိုပါထိပ်တန်း 11 မရှိမဖြစ်ယောဘကိုအင်တာဗျူးသိကောင်းစရာများ| | မွေပွငျအောကျလမျး